Ujeedooyinka Qarsoon Ee Samaynta Hay’adaha Cusub: Maanta Iyo Hay’adda Duulista Hawada Iyo Hay’adaha Ay Ka Miisaaniyad Badan Tahay – somalilandtoday.com
Ujeedooyinka Qarsoon Ee Samaynta Hay’adaha Cusub: Maanta Iyo Hay’adda Duulista Hawada Iyo Hay’adaha Ay Ka Miisaaniyad Badan Tahay
Sidii aan hore ugu soo xusnay taxanaheenii hore waxaa biyo kama dhibcaana inaanu caad saarnayn jirtaanka ujeedooyinka qarsoon ee samaynta iyo isku-darka ha’yaddaha dowliga ah inay ugu horrayso mid miisaniyadeed, Hay’adaha cusub waxaa kamid ah ha’yadda loo bixiyay Ha’yadda Duulista iyo Hawada. Ha’yaddani markii hore waxay ahayd Wasaarradda Duulista iyo Hawda. Wasaarraddani waxay haysay hawlo faro-badan oo isku dhafan. Sidoo kalena waxaa ka shaqaynayay shaqaale tiro badan oo iskugujira shaqaalaha joogtada ah iyo shaqaalaha aan joogtada ahayn. Wasaaraddani waxay lahayd, Wasiir iyo Wasiir ku xigeen, sidoo kale waxay lahayd agaasime guud. Sidaa darteed miisaniyadda masuuliyiintani waxay ahayd mid ka mida miisaniyadda wasaaradda. 2017-ka Ha’yaddan oo ahayd Wasaaradda
Duulista iyo Hawadda miisaniyadeedu waxay dhamayd 11,719,224,340 S/L Shilling.
Xilligan dadka qaar waxay ku doodayeen in wasaaraddani ka miisaniyad badantahay wasaarado dhigeeda ah sidaa darteed cid gaar ahi ay ka leedahay ujeedooyin gaara oo ay doonayaan inay u isticmaalan dan shakhsiyadeed. Xaqiiqdiina miisanaaniyadeedu waa ka badan laba wasaradood oo dhigeeda ah. Wasaaradda Gaashandhiga iyo Wasaaradda Kaluumaysigaba way ka badanayd wadartooda miisaaniyadood. Hadda nuxurku waxa weeyi sannadkan 2018-ka miisaniyaddeedu ma ka yartahay sannadkii hore maadama oo loo baddalay ha’yad sidoo kalena shaqaaluhu intii ka yaryahay.
Ha’yaddan Duulista iyo Hawadda waxaa loo qorsheyay miisaniyad dhan:- 13,982,992,369 SL/Shilling.
Ha’yaddani ma u qalantaa in miisaniyadeedu intaa gaadho marka laga eegayo adeega ay bulshada Somaliland siiso iyo baahiyaha kale duwan ee dalka ka jira, ee ay ugu horreeyaan baahiyaha dhinaca wax soo saarka, ee dalku ka arradan yahay ee ay sidoo kale ka midka yihiin waxa-soosaarka khayraadka macadanta, Somaliland wuxuu ku jiraa waddama ay ku badantahay macadanaha noocyadeeda kala duwan sidaa darteed u baahan maal-gashi caalami ah. Iyadoo sidani jirto xukuumaddu waxay leedahay Wasaaradda Horumarinta Maal-gashiga, oo aan shaqadeeda ka xusi karno inay abuurto xaalad waddamadda iyo shirkadaha adduunku ku maal-gashadaan fursadaha dhaqaale iyo wax-soosaar ee ka jira Somaliland. Haddaba labadan wasaradoodba miisaaniyadooda waxa ka badan Ha’yadda Duulista iyo Hawadda, sida aad ku arki doontaan is bar-bardhiga shaxankan hoose. Akhriste is waydii haddaba ujeedooyinka qarsoon ee samaynta Ha’yaddan cusub.
Haddaba Muwaadin ma waxa aan odhan karnaa Ha’yadda Duulista iyo Hawada ayaa ka muhiimsan Wasaaradaha Tamarta iyo Macdanta iyo Wasaaradda Horumarinta Maal-gashiga, maadama oo wadarta Miisaaniyadda labadan wasaaradood ay dhantahay 11,444,395,992 SL/Shilling. Halka Ha’yadda Duulista iyo Hawaduna Miisaaniyadeedu tahay 13,982,992,369 SL/Shilling. Waa su’aalaha jawaabtoodu u taalo cashuur bixiyaha iyo muwaadin kasta oo danaynaya horumarka dadka iyo dalkaba.
Ha’yadaha kale ee muhiimka ah shaqadoodana aynaan maqaaladan ku soo koobi Karin balse waddarta miisaniyadooda ay ka badantahay miisaniyadda loo qoondeeyey Ha’yadda Duulista iyo Hawadda, waxaa ka mida:- Hay’adda Diiwaanka Sakada iyo Sama-falka. Hay’adda Dhawrista Tayada. Hay’adda Qaxootiga iyo Bara-kacayaasha. Saddexdan Ha’yaddood Miisaaniyaddoodu waxay dhan tahay 11,475,045,948 SL/Shilling halka miisaaniyadda Ha’yadda Duulista iyo Hawadduna tahay 13,982,992,369 SL/Shilling. Tani ma halxidhaalaa misa waa su’aal aan jawabteeda la aqoon, isku-darka ama waddarta miisaaniyadda saddex ha’yaddood oo la mida inay ka badnaato.
Shaxankan Hoose Aan Kaga Bogano Iyadoo Isbar-Bardhigoodu Kuu Muuqdo:
Tani caddayn ma u noqon kartaa Ujeedooyinka qarsoon ee loo samayay ha’yadda cusub maadamo oo aanay ku dhisnayn aqoon iyo wax-soo saarka dalka loogu qoondeeyay miisaniyad ka badan 3 Ha’yaddood, arrimaha noocan oo kale ahi waa kuwo u baahan daraasaddo qoto dheer iyo daba-gal badan oo ku dhisan xaqiiqahan aan soo bandhignay hadda.